Qarixii ka dhacay Degmada Kaxda iyo Casharrada ay tahay in laga barto (Akhriso Qormo muhiim ah) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Raggii hubeysnaa ayaa amray iney u yeeraan guddoomiyaha u amray in dhismaha la fuliyo, dadkii guriga dhisanayay ayaa durba u yeeray gudoomiyaha, daqiiqado yar gudaheedna waaba uu u yimid.
Guddoomiye waaxeedka oo lagu magacaabo Ibraahim Coloow oo wata gaari Surf ah ayaa durba goobta yimid, waxaa la socotay Faaduma Mattaan oo ololaha talaalka caafimaadka waday.
Raggii hubeysnaa iyo gudoomiyaha Waaxda ayaa is helay, gudoomiyaha waxa uu ku yiri ” Maxaad dhismaha u joojineysaan maadaama aan amray anigan gudoomiyaha waaxda ka ah?” Wuxuu islahaa waa askar dowladeed. Waxey u sheegeen inuu soo dagto oo ay dhulka ku wada hadlaan.
Sidaasuu u soo dagayna, iyagoo magaciisa sheegaya oo leh waxaa tahay qofkii aynu dooneynay ayey rasaas la dhaceen, halkaas ayuuna ku dhintay wll Ibraahim Coloow. Faaduma Mataan oo la socotay gudoomiyaha la dilay ayaa iyadoo argagaxsan goobta ka carartay, iyadoo qeybaha danbe ee jirkeeda rasaasta ay kala dhaceen, taasoo keentay iney iyana walaasheen goobta ku naf baxday.
Raggii hubeysnaa waxey hore u sii qaateen gaarigii gudoomiyaha ay dileen oo ay ku baxsadeen, iyagoo isaga tagay gaarigii qaraxyada ay ka buuxeen. Dadkii xaafada oo durba helay xogta labada qof ee la dilay ayaa degdeg u gaaray goobta, qiyaastii waxaa loo soconayaa mudo saacad ah, waxeyna shacabka birmaday ay wateen ku dhawaaad 7 gaari, lama socon marka hore wax askar ah, walow meeshaas khatarteeda laga warqabay.
Marka ay meesha tageen waxaa uga daba tagay Gudoomiyaha degmada oo ay la socdaan Taliyayaasha Nabad Sugida iyo Booliska degmada, iyo howlwadeeno badan oo maamulka kamida.
Dadkii goobta buux dhaafiyay waxaa si kore iyo hoosaba loogu sheegay ineysan u dhawaan gaariga oo qaraxyo looga shakisanyahay, balse dadka weyba ka maahsanaayeen fariimahaa digniinta ahaa.
In ka badan 40 daqiiiqo ayaa la iska dul taagnaa gaariga qaraxyada ay ka buuxeen, maamulka, Saraakiil iyo Shacabba cid aagiisa ka maqneyd ma aaney jirin. Waxaa la ii sheegay in laba kamida dhalinyaradii goobta tagtay uu mid kamida gaariga hoostiisa galay, halka kan kalena uu gargaraacay turuska hore ee gaariga, labadooduba wey ka badbaadeen xasuuqa dhacay.
Qof kamida asxaabta ayaa u tagay dhalinyaradii gaariga ka agdhaweyd oo qaarna soo jiiday kuwana ugu qeyliyay in gaariga qaraxyo ka buuxaan ee laga soo cararro, balse wali dadka wey dhooban yihiin halkii gaariga.
Waxaa la isku raacay in meydadka labada qof ee hore ee la dilay la saaro gaari Ambalaas ahaa oo loo qaaday dhanka C.I.D. afar dhalinyarro ah ayaa la raaciyay, sidaaduu gaarigaa u baxay ayaa mar kaliya la maqlay qarax aad u xooggan oo mar kaliya bedelay jawigii goobta.
Dadkii qaraxa ka badbaaday ayaa wada argagaxay, mid kasta oo gaari watay ayaa marba gaariga dhinac ula cararra, haddana wuxuu ku soo laaban isla goobtii uu ka tagay, gawaaridii waxey noqdeen kuwo muraayadihii ah ka wada daataan.
Gaarigii Ambalaaska ayaa labadii meyd ee hore laga dajiyay oo lagu daad gureeyay dhaawacyadii qaraxa ee naftu ku jirtay. Waxaa meesha ku geeriyooday gudoomiyihii waaxda LiiqLiiqato ee degmada Kaxda Nuur Geedoow, xiliga qaraxa uu qabsanayay waxa uu ku hadlayay telefoon Gaarigana waxa uu kamid ahaa dadkii ugu dhawaa.
W/Q: Abdulshakur Mohamed